मुक्तिनाथ यात्राः प्याकेजमा जाने कि... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
मुक्तिनाथ यात्राः प्याकेजमा जाने कि व्यक्तिगत रोजाई तपाईंको
मुक्तिनाथ, वैशाख ८
मुक्तिनाथ केवल हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको पवित्र धाम मात्र होइन। प्राकृतिक सुन्दरता, हिमाल ताल तथा अन्य आकर्षक दृष्यहरुको अवलोकन गर्न पाइने अनुपम गन्तव्य पनि हो।
तर थाहा नपाएको ठाउँ, कहाँ बस्ने? कहाँ खाने? बाटोमा सुविधा कस्तो छ? भनेर जान सक्नुभएको छैन भने यस्तो समस्या अब हुनेछैन। किनभने पहिले पहिले विदेशीहरुको लागि मात्र टुर प्याकेज बनाउने नेपाली टुर अपरेटरहरु आजभोली नेपालीको लागि पनि टुर प्याकेज बिक्री गर्न थालेका छन्।
हुन त व्यक्तिगतरुपमा पनि जान नसकिने ठाउँ होइन मुक्तिनाथ। तर सबै त्यसरी जान नसक्ने पनि हुन्छन्। त्यस्तै यात्रूहरुको लागि भनेर नेपाली टुर अपरेटरहरुले विभिन्न प्याकेजको विकास गरेका छन्।
नेपालीको पनि घुम्ने बानीको विकास भएकोले, एक्लै वा व्यक्तिगत रुपमा जाँदा खान बस्न तथा व्यवस्थापकीय समस्या आइपर्ने भएकाले नेपालीहरुको लागि पनि टुर प्याकेजको व्यवस्था गरिएको न्यू एरा होलिडेज ट्रेक्स एन्ड एक्सपेडिशन प्रालीका निर्देशक सुर्य भेटुवालले जानकारी दिए।
न्यू एराले नेपालका विभिन्न धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यहरुको लागि विभिन्न प्रकारका प्याकेज बनाएर बिक्रीवितरण गरिरहेको छ। यसैमध्येको एक हो मुक्तिनाथ प्याकेज। जसमा दुई प्रकारका शुल्क रहेका छन्। इकोनोमी र प्रिमियमका रुपमा ति प्याकेज निर्धारण गरिएको छ।
चार रात र पाँचदिनको ति प्याकेजमा काठमाडौंदेखि मुक्तिनाथ र त्यहाँबाट काठमाडौंसम्मको यात्रा समावेश छ।
६ जनाको समूह हुने प्रिमियम प्याकेजको मूल्य १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको छ भने ३० जनाको समूहको इकोनोमी प्याकेजको ११ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तो छ यात्रा विवरणः
पहिलो दिनः पोखरा लेकसाइड
दोस्रो दिनः म्याग्दीको बेनीबजार,मार्फा भिलेज
तेस्रो दिनः मुक्तिनाथ मन्दिर, धुम्बा ताल, जोमशोमबजार
चौथो दिनः तातोपानी, घासा झरना, जोमशोमबाट पोखराको लागि छुट्ने
पाँचौ दिनः पोखराबाट काठमाडौं
केके सुविधा हुन्छ?
प्रिमियम प्याकेजमा काठमाडौंदेखि पोखरासम्म टुुरिष्ट डिलक्स बसमा गइन्छ। बस नजाने ठाउँमा जिपको यात्रा हुनेछ। त्यस्तै इकोनोमी प्याकेजमा भने पोखरासम्म टुरिष्ट बस र त्यहाँदेखि लोकल बसबाट यात्रा गराइने भेटवालले जानकारी दिए। बिहानको खाजा, दिउँसोको खाना र बेलुका खाना उपलब्ध हुने उक्त यात्रामा अनुभवी गाइड पनि उपलब्ध हुने छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २३, २०७३, ०४:४०:५५